Liverpool Waxay Xili Ciyaareedkan Ku Dhamaysan Doontaa Kaalinta AFRAAD Ee Horyaalka Premier League - Gool24.Net
Liverpool Waxay Xili Ciyaareedkan Ku Dhamaysan Doontaa Kaalinta AFRAAD Ee Horyaalka Premier League
September 16, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Liverpool awood uma yeelan doonto inay difaacato horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkii hore ay ku guuleysatay, waxaana xataa ku dhowaan doontaa inay ka hadho tartanka Champions League oo ay isreeb-reeb usoo geli doonto, iyadoo ku dhamaysan doonta kaalinta afraad ee horyaalka, waxaanay kasii hoosayn doontaa Manchester City, Chelsea iyo Manchester United, sida uu saadaaliyey khabiirka ciyaaraha ee Paul Merson.
Reds ayaa lagu dhalleeceeyey sida ay uga aamusan tahay suuqa iibka ciyaartoyda ee kusii dhowaanaya waqtigii uu xidhmi lahaa, waxaana baahidoodu soo baxday usbuucan markii ay naftu iskaga dul-baxday Leeds United oo heerka labaad kasoo dallacday oo ay 4-3 ku kala baxeen.
Tababare Jurgen Klopp ayaa ku adkaysanaya in kooxdiisu ay isku filan tahay inkasta oo uu doonayo inuu keensado Thiago Alcantara oo Bayern Munich u ciyaara. Laakiin sida uu saadaaliyey Paul Merson waxay Liverpool geli doontaa xaalad mugdi ah oo jamaahiirtana qalbi jab ku noqon doonta haddii ay hadda ka faa’iidaysan waayaan suuqa.
“Waxaad eegtaa goolashii laga dhaliyey ciyaartii Leeds. Waxay ila tahay inay u baahan yihiin inay soo iibsadaan ciyaartoy kale. Haddii kale, layaab iguma noqon doonto haddii ay xili ciyaareedkan ku dhamaystaan kaalinta afraad ee Premier League.” Ayuu yidhi Paul Merson.
Khabiirku waxa uu farta ku fiiqay sababaha keeni doona in Liverpool ay si lama filaan ah kaalinta afraad ugu degto, waxaanu yidhi: “Waa isla kooxdii, waxaanay haystaan ciyaartooyo badan oo usbuuc walba ciyaari karaya. Virgil van Dijk haddii uu ka dhaawacmo ma haystaan beddelkiisa. Difaaca garbaha ma haystaan beddelkooda. Ma heli karayaan cid u beddesha saddexda afka hore haddii ay dhaawacmaan.”
Paul Merson oo u ciyaari jiray Arsenal waxa uu sheegay in Manchester City ay tahay koox dhamaystiran oo haysata beddelka boos walba, waxaanu yidhi: “Haddii Man City uu ciyaartoy ka dhaawacmo, way sii ciyaari doonaan. Dhamaadka xili ciyaareedkana waxaynu arki doonaa City oo farqi weyn horreysa, sababtoo ah waxay haystaan koox aad u weyn.
“Tani waa sababta aan uga walaacsanahay Liverpool oo haysata shan ama lix ciyaartoy oo ay waajib tahay inay usbuuc ciyaaraan, toddobaadka xigana maqnaadaan, haddii kale way diciifayaan. Horyaalkani waa kan ugu adag dunida, inaad taam ahaato ayaana ah.”